जटिल रोगको कारण पनि हुन्छ छाला चिलाउने समस्या - NA MediaNA Mediaजटिल रोगको कारण पनि हुन्छ छाला चिलाउने समस्या - NA Media
डा सविना भट्टराई, वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ
हाम्रो छाला विभिन्न कारणले गर्दा चिलाउने गर्दछ। कुनै चिलाउने समस्या केही दिनमै निको हुन्छ भने कुनै महिनौंसम्म रहन्छ। लामो समयसम्म रहने समस्यालाई दीर्घ चिलाउने समस्या भनिन्छ।
चिलाउने समस्या सामान्य छालाको समस्यादेखि जटिल दीर्घ रोगले गर्दा उत्पन्न हुन्छ। कतिपय मानिसमा चिलाउने समस्याले गर्दा रातको निद्रा खलबलिएर मानसिक समस्या समेत उत्पन्न हुन्छ। चिलाउने समस्याको एउटा साइकल हुन्छ जति कन्यायो, त्यति नै कन्याउन मन लाग्छ। शरीरमा उत्पन्न हुने विभिन्न रसायनले गर्दा यस्तो हुन्छ। यस्तो खालको रसायनले गर्दा शरीर चिलाउने, छाला रातो हुने र डाबर आउने गर्छ।
छाला चिलाउनुका मुख्य कारण
जाडोको मौसममा छाला सुख्खा हुने हुँदा चिलाउन सक्छ। धेरैले जाडो मौसममा तातो पानीले नुहाउने तर चिल्लो पदार्थ मस्चराइज क्रिम नलगाउँदा पनि छाला चिलाउँछ। यसैगरी जाडो महिनामा सरसफाइमा ध्यान नदिँदा लुतो, फंगल इन्फेक्सन, कुनै किराले टोकेर एलर्जी समेत भई छाला चिलाउन गर्दछ। यसैगरी जुम्रा र पेटमा जुका परेर पनि चिलाउने गर्दछ।
कुनैबेला दीर्घ रोग जस्तै किड्नीसम्बन्धी समस्या भयो भने ५० प्रतिशत बिरामीमा चिलाउने समस्या हुन्छ। डायलाइसिसमा रहेका ९० प्रतिशत बिरामीलाई चिलाउँछ। कलेजोमा समस्या भएका ८० प्रतिशत बिरामीमा चिलाउने समस्या हुन्छ। ३० प्रतिशत मानसिक समस्या (जस्तो खानासम्बन्धी डिसअर्डर, ओसिडीका बिरामी) मा चिलाउने समस्या हुन्छ।
कहिलेकाहीँ मधुमेह बढेर वा जन्डिस भएर पनि चिलाउन सक्छ। छालामा हुने क्यान्सर भयो भने पनि शरीर चिलाउने गर्दछ। शरीरमा रगतको मात्रा, थाइराइडको मात्रा कम भयो भने र दम भएको मानिसको छाला सुख्खा हुने हुँदा पनि शरीर चिलाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ कुनै खानेकुरा खानाले पनि एलर्जी भएर पनि छाला चिलाउँछ।
बिरामीको समस्या पहिचान गर्नको निमित्त पहिला के कारणले चिलाउँछ? कस्तो किसिमले चिलाउँछ? कुन बेला बढी चिलाउँछ? भन्ने कुरा चिकित्सकले राम्रोसँग सुनिदिनुपर्छ। पहिलो कारण पत्ता लगाएर मात्र उपचार गर्नुपर्छ। कतै शरीरमा गाँठागुठी छ कि छैन, छाला बाक्लो भएको छ कि छैन भनेर पहिला राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्दछ। रगतको जाँच, किड्नीको जाँच, लिभरको जाँच गर्न एक्सरे गर्ने र चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम रोग पत्ता लागिसकेपछि उपचार गर्न सहज हुन्छ।
चिलाउने समस्याले मानिसको निद्रा खलबलिएको छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्दछ। निद्रा खलबलिएको छ भने अनेक किसिमको मनोरोग उत्पादन हुने गर्दछ। त्यसैले यस्ता बिरामीलाई निद्रा लगाउने औषधि दिनुपर्दछ।